नेपाल ईन्जीनीयरिङ कलेजको ‘सम्पत्ति विवाद’ उत्कर्षमा, २२०० विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा ! (भिडियोसहित) « News24 : Premium News Channel
नेपाल ईन्जीनीयरिङ कलेजको ‘सम्पत्ति विवाद’ उत्कर्षमा, २२०० विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा ! (भिडियोसहित)
फेरि बल्झियो ईन्जीनियरिङ कलेजको सम्पत्ति विवाद
भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा लामो समयदेखि निकै विवाद छ । विवादको मुख्य विषय होः कलेज समुदायिक हो कि निजी ? भन्ने ।
यो कलेजले २०५१ सालमा त्रिभुवन विश्व बिद्यालयबाट सम्बन्धन पायो । ३५ लाख रुपैयाँ लगानीमा सुरु भएको यो अलेजसँग अहिले करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ । छोटो समयमै अत्यधिक नाफा कमाएपछि कलेज सञ्चालकबीच सम्पत्तिका विषयमा सुरु भएको मनमुटाबले विवादको रुप लियो ।
सम्पत्ति विवादकै कारण संचालन समितिका ७ सदस्यमध्ये लम्बोदर न्यौपाने, डा.रामरत्न उपाध्याय, लवराज भट्टराई, उपेन्द्र गौतम, सूर्यबहादुर केसी एक समूहमा विभक्त भने हरिप्रसाद पाण्डे र दिपक भट्टराई अर्को समूहमा छन् । हरिप्रसाद र दिपक चाहिँ कलेज सामुदायिक भएको दाबी गर्छन् भने अर्को समूह कलेज नीति भएको बताउँछ ।
लामो समयदेखिको विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ । कलेजको सम्पत्ति विवादले सोमबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा समेत प्रवेश पाएको छ । जहाँ कलेजका बर्तमान अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने र उनको समर्थक सदस्यहरु उपस्थित थिए । बहसमा सांसदहरुले एउटै संस्थालाई दुई फरक उद्देश्य र प्रकृतिमा दर्ता गरिएको देखिनु नै गलत भएको बताए । समिति बैठकमा सांसदले कलेजका नाममा खरिद भएको जग्गा, सेयर हस्तान्तरण, विदेश भ्रमण र अध्यक्षले लिएको पारिश्रमिकलगायतमा प्रश्न गरेका थिए ।
सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै कलेज संचालक समितिका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले कलेज नितान्त निजी नै भएको दावी गरेका छन् ।
समितिमा भएको सवाल–जवाफका न्यैपानेले कलेज निजी नै भएको थुप्रै तर्क पेश गरे । दिपक भट्टराईले कलेजबाट आफूले हालेको सेयरबाट ९७ लाख रुपैयाँ लिएको बताउँदै उनले, सामुदायिक कलेज भए सेयर लेनदेनको कुरा कसरी हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।
त्यस्तै उनले संचालक समितिका सदस्य हरि पाण्डेले ‘१ः२ को अनुपातमा सेयरको बाँडफाँड गरौँ’ भन्दै आफुलाई चिठी लेखेको बताए । कलेज सामुदायिक भएको तर्क गर्नेले सेयरको अनुपात खोज्नु जायज नहुने न्यौपानेको तर्क छ । उनले यस विषयमा प्रश्न गर्न सांसदलाई आग्रह गरेका थिए ।
यो कलेजलाई २०५५ सालमा सम्बन्धन परिवर्तन गरी पोखरा विश्व विद्यालय मातहत ल्याइएको थियो । अहिले फेरि मध्यपश्चिम विश्व विद्यालय मातहत लैजाने तयारी भइरहेको छ । कलेजमा अहिले २२ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सञ्चालनको विवादले विद्यार्थीको भविष्य नै अन्योलनमा पर्ने चिन्ता बढेको छ ।
यसरी शुरु भयो कलेजमा विवाद
भक्तपुर चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको अध्यक्ष अहिले लम्बोदर न्यौपाने छन् भने सदस्यहरुमा डा.रामरत्न उपाध्याय, लवराज भट्टराई, उपेन्द्र गौतम, सूर्यबहादुर केसी, हरिप्रसाद पाण्डे र दिपक भट्टराई छन् । २०५१ सालमा ३५ लाख रुपैयाँ लागतमा कलेज सुरु गरिएको कलेजका सन्चालकहरुको स्वार्थ बाँधिदा विवाद भएको हो । विवादपछि लम्बोदर न्यौपाने, डा.रामरत्न उपाध्याय, लवराज भट्टराई, उपेन्द्र गौतम, सूर्यबहादुर केसी एक समूहमा छन् भने हरिप्रसाद पाण्डे र दिपक भट्टराई अर्को समूहमा छन् ।
कलेजको सबै सम्पत्ति जग्गा, भवन र प्रयोगशाला अध्यक्ष न्यौपानेले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा नामसारी गरेपछि विवादको शुरुवात भएको हो । २०५१ सालदेखि सञ्चालन हुँदै आएको यो कलेज २०६० सालमा भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संस्था दर्ता ऐनअनुसार दर्ता भयो । तर लम्बोदर न्यौपाने लगाएतका समूहले २०७४ वैशाख २५ गते कलेजलाई प्राइभेट लिमिटेड बनाएर कम्पनी रजिष्टारमा दर्ता गराएपछि विवाद बाहिर आयो ।
कम्पनी बनाइएको प्रबन्धपत्रमा भनिएको छ– यसअघि कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता नभई पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा मात्रै सञ्चालन भएका सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यहरु आजको मितिदेखि कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालन भएको मानिनेछ । र उक्त कलेजले खरिद् वा निर्माण गरेका सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति स्वतः यस कलेजका हुनेछन् ।यसलाई कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता गरेपछि संस्थाका सात सञ्चालकमध्ये हरिप्रसाद पाण्डे र सलिल भट्टराईले निजीकरणको विरोध गरिरहेका छन ।
कलेजका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने भने २०५१ सालदेखि सन्चालन भएको कलेज जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्र्तगत कहिले नगएको बताउँदै सरकारी नियम अनुसार कम्पनीमा जानुपर्ने वाध्यता अनुसार नै कलेजलाई कम्पनीमा लगिएको दावी गर्दै आएका छन । संस्था स्थापना गर्ने सञ्चालक समितिका सदस्य स्टेक होल्डर (सरोकारवाला) भएको भएपनि सेयर होल्डर (सेयरधनी) नभएको कारण यो कम्पनीमा जान नसक्ने अर्काथरिको तर्क छ ।
कलेजको नाममा चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा ३९ रोपनी जग्गा छ । भने तत्कालिन चाँगुनाराण गाविसले १७४ रोपनी जग्गा कलेजलाई दिएको थियो । चाँगु नारायण गाउँ विकास समितिको उक्त जग्गा भने मन्त्री परिषद्को २०७३ साउन ७ गतेको निर्णय अनुसार चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अन्र्तगत रहेको छ । सबै हिसाब गर्दा कलेजसँग अचल सम्पत्तिमात्र कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँको देखिएको छ । धेरै सम्पत्ति देखेपछि सञ्चालकहरुबीच द्धन्द्ध शुरु भएको हो ।
अहिले कलेज सन्चालकहरुको द्धन्द्धको कारण कलेजमा अन्य स्वार्थ समूहहरु खडा भएका छन् । एकपक्षले विद्यार्थी संघ संगठनलाई उचालिरहेका छन् भने अर्को पक्षले पनि आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गर्दै आइरहेका छन् । २०५१ सालदेखि कलेज सन्चालनमा आए पनि २०६० सालमा एनजीओ अन्र्तगत लैजाने प्रयास भएको देखिन्छ तर त्यसयता यो एनजीओ पनि नवीरकण भएको छैन जस्को कारण स्वार्थी समूहहरुले आफू अनकुल यसको व्याख्या गर्दै आइरहेका छन् ।